ဓာတုပစ္စည်းဖြည့်စက် - Micvd.com
သင်သည်သင်၏အရည် - ဖြည့်လိုင်းအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, ရေရှည်ထုပ်ပိုးစက်ယန္တရားလိုအပ်တဲ့အခါ, NPACK သင်လိုအပ်သမျှရှိသည်။ ကွန်တိန်နာများကိုဓာတုပစ္စည်းများဖြင့်ဖြည့်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ဓာတုဗေဒအလွဲသုံးစားမှုကိုခံနိုင်သည့်စက်ယန္တရားများအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သောတိကျသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ NPACKအရည်ဖြည့်သည့်စက်များသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးမကြာမီအချိန်တွင်သင်ပစ္စည်းကိရိယာပျက်ကွက်ခြင်းအတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
ဓာတုပစ္စည်းများသည်အချဉ်ဓာတ်အမျိုးမျိုးနှင့်အမျိုးမျိုးသောနေရာများတွင်ရောက်ရှိလာပြီးအချို့သောသူများအတွက်မှန်ကန်သောပုလင်းသွပ်စက်များသည်အခြားသူများနှင့်မကိုက်ညီပါ။ NPACK အကောင်းဆုံးသောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သေချာစေရန်အမှုစက်အမျိုးမျိုးကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဓာတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ သင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလုပ်ဆောင်သောအခါသင်၏တိကျသောထုပ်ပိုးမှုမျဉ်းအတွက်အကောင်းဆုံးစက်ကိရိယာများကိုရှာဖွေရန်သင့်စက်ကိရိယာများချောမွေ့စွာအတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားကြမည်။ သငျသညျအရည်ဖြည့်ရုံသို့မဟုတ်ပြီးပြည့်စုံ set-up ပဲလိုပဲ, သင်နှင့်အတူသင်လိုအပ်သောအရာကိုတွေ့လိမ့်မည် NPACK။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်မှုနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဓာတုပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများစွာကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။
သင်သည်သင်၏ကွန်တိန်နာများအတွက်အရည်ဖြည့်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ, သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာအတွက်မည်သည့် (များ) အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ကိုကြည့်ဖို့ငါတို့ကွဲပြားခြားနားသောစက်တွေ၏ရွေးချယ်မှုကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ At NPACK, ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓာတုအရည်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်းအပါအဝင်လိုအပ်ချက်များစွာနှင့်ကိုက်ညီရန်အရည်ဖြည့်အမျိုးမျိုးသိုလှောင်ဖို့ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့် Choose NPACK ထုပ်ပိုးပစ္စည်းအတွက်လား။
စိုက်ပျိုးရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဓာတုပစ္စည်းများအတွက်ရည်ရွယ်သည့်ဓာတုပစ္စည်းဖြည့်သည့်စက်ကိုလိုအပ်သောချေးခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ဒီဇိုင်းဆွဲသင့်သည်။ NPACK အမျိုးမျိုးသောဓာတုပစ္စည်းများအတွက်ပုလင်းစက်များတပ်ဆင်ပြီးစက်မှုနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုသင်ဖြည့်သွင်းပါစေ၊ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည့်အရာရှိပါသည်။
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဓာတုပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးပုလင်းဖြည့်သည့်အရာများအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်သောထုပ်ပိုးမှုလိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်ဖြည့်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အဆင်သင့်ကူညီပေးပါမည်။
NP-VF-1 အလိုအလျောက် servo မော်တာဖြင့်မောင်းနှင်သည့်ပစ္စတင်စက်ကို NP-VF တွင်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်အလှကုန်ပစ္စည်းများ၊ နေ့စဉ်ဓာတုပစ္စည်းများကဲ့သို့သော viscous အရည်များဖြည့်ဆည်းရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ပျားရည်အဆာစက်, ငံပြာရည်အဆာစက်။
အထွေထွေ servo မော်တာအားဖြင့်မောင်းနှင်
အဆက်အသွယ်အရည်အစိတ်အပိုင်းများမှာသံမဏိ 316L ဖြစ်သည်
အားလုံးအဆက်အသွယ်အစိတ်အပိုင်းများ Teflon, Vinton နှင့်သင့်လိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းရေပိုက်နိုင်ပါတယ်။
Siemens, Schneider နှင့် Panasonic စသည့်ကမ္ဘာကျော်အစိတ်အပိုင်းများအမှတ်တံဆိပ်ကိုအလိုက်သင့်ပြုပြင်ပါ
ပစ္စတင် stroke ကိုမောင်းနှင်ရန် Panasonic မှ servo မော်တာကို Adapt လုပ်ပါ။
နှုတ်သီးတံ2468 10 12 16
အတွဲ (ml) 10-30ml မှ 30-100ml
တစ် 100ml နှုန်း
စွမ်းအား 220V 50 / 60hz
အပြည့်အသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းညှိရန်၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်အားဖြင့်အလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်မှု၊ တိကျမှုနှင့်တည်ငြိမ်မြန်နှုန်း
ထိန်းသိမ်းထားဖို့လွယ်ကူပါတယ်, အဘယ်သူမျှမကအထူး tools များလိုအပ်သည်။
အဘယ်သူမျှမပုလင်း, အဘယ်သူမျှအဆာ, အလိုအလျှောက် PLC ထိန်းချုပ်မှု
ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြည့်ထားသော nozzle များသည်ဆန့်ကျင်မှုန့်၊ ပိုး၊
တိကျသောအဆာထုထည်ပမာဏ± 0.5-1% အတွင်းနှင့်စုစုပေါင်းပုလင်းကောင်တာအတွင်း။
NP-GF Bleach ဖြည့်စက်
NPACK NP-GF Bleach အရည်ဖြည့်စက်ကိုအထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်အနိမ့် viscosity ဖြစ်သော်လည်းအလိုလျောက်အရည်ဖြည့်တင်းရန်အတွက်ထုတ်လုပ်သည်။ စက်တစ်ခုလုံးကို Schneider PLC ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်တိကျသောဖြည့်တင်းခြင်း၊ Pneumatic အစိတ်အပိုင်းသည် AirTAC အမှတ်တံဆိပ်ကိုရေရှည်တည်တံ့သောလည်ပတ်မှုသေချာစေရန်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်အက်ဆစ်၊ အယ်ကာလီပစ္စည်းများ၊ မြင့်မားသောတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်သည့်ပိုးသတ်ဆေးများ၊ ပိုးသတ်ဆေး ၈၄ ခု၊
1. စက်ပစ္စည်းအားလုံးအား PVC မှဆောက်လုပ်ထားသည်၊ အချောပါသောအဆောင့်ခံသူ၊ ထိန်းချုပ်သေတ္တာအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
၂။ Schneider PLC ထိန်းချုပ်မှုနှင့် Schneider တို့ထိတွေ့မှုဖန်သားပြင်သည်အရွယ်အစားပြောင်းလဲခြင်း (သို့) parameters များကိုပြောင်းလဲခြင်းအတွက်လွယ်ကူသည်။
4. ဓာတ်ပုံ - လျှပ်စစ်အာရုံခံစနစ်နှင့်အဆုတ်ချိတ်ဆက်မှုထိန်းချုပ်မှု၊ ပုလင်းရှားပါးမှုအတွက်အလိုအလျှောက်ကာကွယ်ပေးမှု။
၅။ အနီးကပ်တည်နေရာဒီဇိုင်း၊ လွယ်ကူစွာအုပ်ချုပ်နိုင်မှု၊ ပုလင်းအားလုံးအရွယ်အစားထုပ်ပိုးရန်သင့်လျော်သည်။
ပုံစံ NP-GF အလိုအလျောက်ဆွဲငင်အားဖြည့်စက် (တောက်ပသောအရည်)
နှုတ်သီးတံ68 10 12 16 20
Idea ဖြည့်အကွာအဝေး 100-1000ml, 500-5000ml
တစ် 1000ml နှုန်း 24bpm 32bpm 40bpm 48bpm 64bpm 80bpm
၁။ ခိုင်ခံ့။ ရှည်သော PVC ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပါ
၂။ PLC ကိုထိန်းချုပ်ပါ၊ ထိတွေ့မှုပမာဏကို touch screen ဖြင့်ချိန်ညှိပါ
ရေငုပ်ဆန့်ကျင်ရန်ခေါင်းကိုဖြည့် 4. ရေငုပ်
NPACK NP-GF တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးအရည်ဖြည့်သည့်စက် အနိမ့်ထဲမှာပါတဲ့ပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးအရည်အဆာများအတွက်တီထွင်သည်။ စက်တစ်ခုလုံးကို Schneider PLC ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်တိကျသောဖြည့်တင်းခြင်း၊ Pneumatic အစိတ်အပိုင်းသည် AirTAC အမှတ်တံဆိပ်ကိုရေရှည်တည်တံ့သောလည်ပတ်မှုသေချာစေရန်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်အက်ဆစ်၊ အယ်ကာလီပစ္စည်းများ၊ မြင့်မားသောတောက်ပသောပိုးသတ်ဆေးများ၊ ပိုးသတ်ဆေး ၈၄ ခု၊
1.All စက်ပစ္စည်းကတော့ပေါ်ကို, ထိန်းချုပ်သေတ္တာအပါအဝင်ဆန့်ကျင်တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးမှ PVC အားဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားကြသည်။
2.Schneider PLC ထိန်းချုပ်မှုနှင့် Schneider တို့ထိဖန်သားပြင်လည်ပတ်မှု၊ ကအရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ် parameters တွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်လွယ်ကူသည်။